Izindaba - FTTR - Vula ikusasa elibona konke
I-FTTR - Vula ikusasa elibona konke
I-FTTH (i-fiber eya ekhaya), ababaningi abantu abakhuluma ngayo manje, futhi akuvamile ukubikwa ngayo kwabezindaba.
Hhayi ngoba lingekho inani, i-FTTH ilethe amakhulu ezigidi zemindeni emphakathini wedijithali; Hhayi ngoba kungenziwanga kahle, kodwa ngoba kwenziwa kahle kakhulu.
Ngemva kwe-FTTH, i-FTTR (i-fiber ekamelweni) yaqala ukungena emkhakheni wombono. I-FTTR isiphenduke isixazululo esithandwayo sekhwalithi ephezulu yokuxhumana kwasekhaya, futhi ibona ngempela yonke i-house optical fiber. Inganikeza ulwazi lokufinyelela lwe-Gigabit kuwo wonke amagumbi namakhona nge-broadband ne-Wi Fi 6.
Inani le-FTTH liboniswe ngokugcwele. Ikakhulukazi, i-COVID-19, eyaqubuka ngonyaka owedlule, iholele ekuhlukaniseni abantu ngabanye ngokomzimba. Inethiwekhi ye-broadband yekhwalithi ephezulu yasekhaya isiphenduke umsizi obalulekile emsebenzini wabantu, impilo nokuzijabulisa. Isibonelo, abafundi abakwazanga ukuya esikoleni ukuze bafunde. Nge-FTTH, bangathatha izifundo ze-inthanethi ezinekhwalithi ephezulu ukuze baqinisekise inqubekelaphambili yokufunda.
Ngakho ingabe i-FTTR iyadingeka?
Ngempela, i-FTTH empeleni yanele ukuthi umndeni udlale i-tiktok futhi uthole i-inthanethi. Kodwa-ke, esikhathini esizayo, kuzoba nezigcawu eziningi nezinhlelo zokusebenza ezicebile zokusetshenziswa kwasekhaya, njenge-teleconference, amakilasi aku-inthanethi, ividiyo ye-4K / 8K enencazelo ephezulu kakhulu, imidlalo ye-VR / AR, njll., edinga ulwazi lwenethiwekhi oluphezulu, kanye ukubekezelela izinkinga ezivamile ezifana ne-network jam, ukwehla kwefreyimu, i-asynchrony ebonakalayo yomsindo izoba phansi futhi ibe phansi.
Njengoba sazi, i-ADSL ngokwesisekelo yanele ngo-2010. Njengesandiso se-FTTH phakathi komndeni, i-FTTR izothuthukisa ingqalasizinda ye-Gigabit fiber broadband futhi idale indawo entsha yezimboni engaphezu kwezigidigidi. Ukuze kuhlinzekwe ngolwazi lokufinyelela lwe-Gigabit kuwo wonke amagumbi nasemakhoneni, ikhwalithi yekhebula yenethiwekhi isiphenduke ibhodlela le-Gigabit endlini yonke. I-FTTR ithatha indawo yekhebula lenethiwekhi nge-fiber optical, ukuze i-fiber optical ikwazi ukusuka "ekhaya" iye "egumbini", futhi ixazulule ibhodlela lezintambo zenethiwekhi yasekhaya ngesinyathelo esisodwa.
i-fiber optical ibonakala njengendlela yokudlulisa isignali esheshayo, futhi asikho isidingo sokuthuthukisa ngemva kokuthunyelwa; Imikhiqizo ye-fiber optical ivuthiwe futhi ishibhile, engasindisa izindleko zokuthumela; Impilo ende yenkonzo ye-fiber optical; I-fiber optical esobala ingasetshenziswa, engeke ilimaze umhlobiso wasekhaya nobuhle, njll.
Iminyaka eyishumi ezayo ye-FTTR kufanelekile ukulangazelela.
Isikhathi sokuthumela: Sep-16-2021
8 I-Core Single Mode Fiber Optic Cable Price, I-Cladding Diameter, Ikhebula elingaphansi komhlaba, Yehlisa Intengo Yekhebula, I-Optical Fiber G657, Yehlisa Intengo Yekhebula Le-Fiber Optic,